रु रु को आईपीओ आज बिहान साढे ८ बजे बाँडफाँड हुँदै, कसरी हेर्ने आईपीओ रिजल्ट? – Khabarbot
रु रु को आईपीओ आज बिहान साढे ८ बजे बाँडफाँड हुँदै, कसरी हेर्ने आईपीओ रिजल्ट?
काठमाडौं । रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको आईपीओ आज बाँडफाँड हुन लागेको छ । अहिले बिहान साढे ८ बजे बाँडफाँड गर्न लागिएको हो ।
गएरातिको हावाहुरीसँगै चट्याङ लागेर २ जनाको मृत्यु